पत्याउनुस् ! यसरी बन्यो एउटै बलमा २८६ रन !! | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Jul 13, 2019
क्रिकेटको रोमाञ्चकता भनेको रन नै हो । जसले जति धेरै रन बनाउन सक्यो उसको जित हुन्छ । तपाईलाई कसैले १ बलमा कति रन बन्छ ? भन्यो भने तपाईले के उत्तर दिनुहुन्छ । बढीमा ७ रन होइन त ।
१, २, ३, ४, ५, ६ र ७ रन सम्म बन्छ भन्ने सहज उत्तर पनि हो । छक्का प्रहार गर्दा यदि त्यो ‘नो बल’ थियो भने बढीमा सात रन हुन्छ । पख्नुस क्रिकेटमा १ बलमा २८६ रन बनेको इतिहास छ ।
रुख तत्कालै काट्न नसकिने भएपछि बन्दूकले गोली हानेर बल भुँइमा झारिएको थियो । २८६ रन बनाउँदा २ जना ब्याट्सम्यानले करिब ६ किलोमिटर दौड पुरा गरेका थिए । त्यतिबेला रनको लिमिट नभएकाले यस्तो भए पनि अहिले भने यस्तो गर्न पाइदैन । अहिले बढीमा तीन रनमात्रै दौड्न पाइन्छ ।